Su'aalo noocee ah ayuu ilmahaygu ka jawaabi karaa (iyo kuwee ayaa awoodi kara inuu weydiiyo)? - Tababbarka garashada
Jadwalkani wuxuu muujinayaa xirfadaha la xiriira fikradaha aasaasiga ah ee afka. Dabcan waxaa jira noocyo badan oo shaqsiyeed oo ka mid ah carruurta. Si kastaba ha noqotee, faraq aad u weyn oo ka yimaada heerarkan ayaa noqon kara sababo la-talin takhasusle ah.
Su'aalaha ay tahay inuu ka jawaabo
Su'aalaha leh "halkee". Tusaale: aaway kubadii? (wuxuu ka jawaabayaa isagoo tilmaamaya sawirka kubbadda ee buugga ku qoran)
Su'aalaha leh "waa maxay?" la xidhiidha walxaha la yaqaan
Haa / maya ka jawaab su'aalaha, madaxa ama ruxitaanka
Waxay muujineysaa walxaha la sharaxay, tusaale ahaan waxay muujineysaa koofiyad markii aad weydiineysid "Maxaad madaxa saaraysaa?"
Waxay ka jawaabaysaa su'aalo fudud oo ku saabsan waxa, sidee, goorma, goobta iyo sababta
Waxay ka jawaabaysaa su'aalaha sida "Maxaad qabataa markaad qabow dareento?"
Waxay ka jawaabaysaa su'aalaha sida "Halkee ...", "Maxay tahay?", "Maxaad samaynaysaa ....?", "Yuu yahay ...?"
Kajawaab ama faham su'aalaha sida "Ma ogtahay ...?"
Kajawaab su'aalaha adag ee leh "Yay", "Maxay", "Xagee" iyo "Sidee"
Waxay kaga jawaabtaa su'aalaha "Maxaad samaynaysaa haddii?", Sida "Maxaad samaynaysaa haddii roobku da'o?"
Waxay ka jawaabtaa su'aalaha la xiriira shaqooyinka walxaha, sida "Maxaa qaaddo loogu talagalay", "Maxaan u leenahay kabo?"
Jawaabaha su'aalaha "Goorma"
Kajawaab su'aalaha "Immisa?" (markay jawaabtu ka badnayn afar)
In wax soo saar
Su'aalaha ay tahay inuu awoodo inuu weydiiyo
Ku bilow adeegsiga foomka su'aalaha, adiga oo ka bilaabaya "Waa maxay taasi?"
Adeegso sagxadda kor u socota
Wuxuu weydiiyaa su'aalo - xitaa kuwa la fududeeyay - oo la xiriira baahidiisa, tusaale ahaan "Halkee buskud?"
Wuxuu weydiiyaa su'aalo "Halkee?", "Muxuu yahay", "Muxuu sameeyaa?"
Weydiiyaa su'aalo fudud "Sabab?"
Markaad weydiineysid su'aasha adeegso "Maxay", "Xagee", "Goorma", "Sidee" iyo "Cidkee"
Weydiiyaa su'aalo leh "Ma a / a ...?"
Weydiiyaa su'aalaha soo socda iyadoo la adeegsanayo qaab dhismeedka naxwaha saxda ah: "Ma rabtaa ..." + bilaa-awaal, "Ma awoodi kartaa ...?"
Waxaa tarjumay oo la waafajiyay: Lanza iyo Flahive (2009), Hagaha LinguiSystems Hagaha Milestones Isgaarsiinta
Inaga Luqadda GameCenter waxaad ka heli doontaa daraasiin waxqabadyo luqadeed oo is-dhexgal bilaash ah khadka tooska ah
Inaga bogga tab waxaad ka heli doontaa kumanaan kaararka bilaashka ah ee la xiriira luqadda iyo barashada
cunuggu wuu fahmaa su'aalaha, ilmaha ka jawaab su'aalaha, su'aalaha ilmaha, afka, horumarinta luqadda
Su'aalo noocee ah ayuu ilmahaygu ka jawaabi karaa (iyo kuwee ayaa awoodi kara inuu weydiiyo)?2020-11-052020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/ezgif-3-fd7065ffb83c.png200px200px
Immisa erey ayey tahay inuu cunugaaga ogaado (iyadoo kuxiran da'da)afka
In la xoojiyo xusuusta shaqada si loo hagaajiyo luqaddaMaqaallo, Luuqad, Xusuusta Shaqaynta